विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले १३ औं दक्षिण एशियाली खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत विभिन्न विद्यामा विजेता ८८ जना खेलाडीहरुलाई नगद पुरस्कार र प्रमाण–पत्र सहित सम्मान गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले गत मङ्सिरमा सम्पन्न खेलकुद प्रतियोगितामा प्रदेश नं. १ का एकल र टीम तर्फका स्वर्ण, रजत र कास्य पदक विजेताहरुलाई आज विराटनगरमा एक औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरि सम्मान गरेको हो । सम्मानित हुनेमा एकल तर्फ स्र्वण पदक हाँसिल गर्ने ६, रजत पदक हाँसिल गर्ने ४ र कास्य पदक हाँसिल गर्ने १० गरि कुल २० जना खेलाडीहरु रहेका छन ।
यस्तै प्रदेश सरकारले टीमतर्फ स्वर्ण पदक विजेता १५, रजत पदक विजेता २२ र कास्य पदक विजेता ४१ जना गरि कुल ७८ जनालाई प्रमाणपत्र सहित सम्मान गरेको छ । पदक हाँसिल गर्ने १० जना खेलाडीहरु दोहोरिएकाले कुल सम्मानित हुने खेलाडीहरुको संख्या ८८ रहेको छ । प्रदेश सरकारले एकलतर्फ स्वर्ण, रजत र कास्य पदक विजेतालाई क्रमशः जनही रु. ३ लाख, २ लाख र १ लाखका दरले नगद पुरस्कारसहित सम्मान गरेको छ ।
त्यस्तै टीमतर्फ भने प्रदेश सरकारले खेलाडी संख्याको आधारमा टीममा स्वर्ण पदक विजेता खेलाडीलाई बढीमा १ लाख र कम्तिमा ७५ हजार ५ सयका दरले नगद पुरस्कारसहित सम्मान गरेको छ । त्यसैगरि प्रदेश १ सरकारले टीमतर्फ नै रजत र कास्य पदक विजेता खेलाडीलाई खेलाडी संख्याको आधारमा टीममा रजत पदक विजेतालाई बढीमा १ लाख र कम्तिमा ६० हजार तथा कास्य पदक विजेतालाई बढीमा ५० हजार र कम्तिमा ४१ हजारका दरले नगद पुरस्कारसहित सम्मान गरेको छ ।
सोही अवसरमा बोल्नुहुँदै प्रदेश १ का सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले खेलको सम्बन्धमा परम्परागत मुल्य र मान्यतालाई प्रदेश सरकारले परिवर्तन गर्न चाहेको बताउनुभयो । उहाँले खेलको माध्यमबाट जिविकोपार्जन, सम्मान र पहिचान पनि बनाउन सकिन्छ भन्ने मान्यतालाई प्रदेश सरकारले आत्मसात गरेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
प्रदेश नं. १ का स्वर्ण, रजत र कास्य पदक विजेता खेलाडीहरुलाई उपयुक्त समयमा भव्य कार्यक्रमको आयोजना गरि प्रदेश सरकारले ३ लाख, २ लाख र १ लाखका दरले सम्मान गर्ने योजनासहितको घोषणा गरेको थियो । तर कोरोना भाईरसको प्रकोपका कारण सो योजना सफल हुन नसकेको प्रदेश नं. १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश सरकारका लागी खेलकुदको क्षेत्र बिशेष प्राथमिकतामा रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । मुख्यमन्त्री राईले भन्नुभयो, ‘प्रदेश नं. १ लाई खेलकुदको हब बनाउने दीर्घकालीन योजनासाथ प्रदेश सरकार अघि बढिरहेको छ ।’
उक्त अवसरमा सम्मानित खेलाडीहरुले प्रदेश सरकारको सम्मान र प्रोत्साहनप्रति खुशी व्यक्त गरेका छन । उनीहरुले भने राष्ट्रलाई चिनाउने आफ्नो प्रयास तथा योगदानलाई प्रदेश सरकारले कदर गरिदिएको बिषयप्रति सन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन ।
बुधबार, ३१ असार, २०७७, साँझको ०५:५८ बजे